June 15, 2020 2291
बलिउड अभिनेता सुशान्त सिंह राजपुतको अन्तिम बिदा’ई भएको छ ।मुम्बइमा यतिबेला पानी परिरहेको छ ।आफ्नो साथीलाई अन्तिम बिदाई गर्न र उनको परिवारलाई सान्तवना दिन बलिउडका सेलिब्रेटीहरु उनको घर ब्रान्द्रा अपार्टमेन्टमा आइपुगेका थिए ।
उनको फिल्म ‘छिचोरे’मा उनले आ त्मह त्या गर्नु हुदैन भनेर सन्देश दिएका थिए । “मैले छोरालाई भने’को थिएँ कि जुन दिन तेरो छनौट हुन्छ, बुबा र छोरा बसेर उत्सव मना’ऊँला । तर यो त भनेकै थिएन कि यदि छनौट भएन भने के गर्ने ।
छोरा, राम्रो अंकहरू ल्यायौभने, यो कले’जमा भर्ना पाईनेछ, यो कोर्स गर्यौ भने, यो रोजगार पाईनेछ । अरे यार, १० लाख विद्यार्थिहरू परीक्षामा बस्छन्, त्यसमध्ये १० हजार मात्र छानिएका हुन्छन्, बाँकीका ९लाख ९० हजार बच्चाहरु ? तिनी’हरूलाई थाहा नै छैन कि अब के गर्ने ?
किनकि यसबारे कहिले उनीहरूले तयारी नै गरेनन् । उनीहरूलाई लाग्छ कि उनीहरू परीक्षामा होइन जीव’नमा असफल भई रहेका छन् ।
परीक्षाको नतीजा’ले निर्णय गर्दैन कि हामी बिजेता हौं कि हरुवा हौं । यो निर्णय त कोशिश ले गर्दछ कि हामी’ले कोशिश कत्तिको गरेछौं वा गर्यौं कि गरेनौं ।” उनको फिल्मको यो डाइलग’लाई बिर्सदै उनले यो कदम चाले । – के टी एम दैनिक
Prevशुसान्तकी गर्लफ्रेन्ड रुँदै अस्पताल पुगिन् …हेर्नुहोस्….
Nextआज थप ४५१ संक्रमित भेटिए, कुन जिल्लामा कति थपिए ? हेर्नुहोस्
श्वेता खड्का र विजयन्द्रले रमाइलो गरेको भिडियो टिक`टकमा बन्यो भाइरल (हेर्नु`स् भिडियो )
यी युवतीको भिडियो बन्यो भाइरल, कमेन्टमा युवाले भने १६/१७ वर्षमा यस्तै हुन्छ नानी (भिडियो सहित) (132858)